Waa maxay toxoplasmosis iyo sida ay u saamayso uurka | Bezzia
Tony Torres | 11/05/2022 23:55 | Uurka
Toxoplasmosis waa cudur la is qaadsiiyo, oo uu keeno noole yar yar oo loo yaqaan "toxoplasma gondii" sidaas darteed magaciisa. Qof kasta wuu qaadi karaa caabuqan, laakiin marka ay timaado naagta uurka leh khatartu waxay noqon kartaa dhimasho. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in laga hortago caabuqa iyadoo la iska ilaalinayo isticmaalka cuntooyinka qaarkood oo laga yaabo inay ku jiraan protozoan-ka sababta caabuqa.
Sababtu waxa weeye dulinka keena caabuqa waxa uu ka gudbi karaa mandheerta oo uu ku dhici karaa uurjiifka, taas oo keeni karta caabuq ku dhasha, yacni ka hor dhalmada. Haddii tani dhacdo inta lagu jiro toddobaadyada ugu horreeya ee uurka, uurjiifku wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin kala duwan oo koritaan ah, oo leh cawaaqibka ugu xun. Halkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato toxoplasmosis iyo sida ay u saamayso uurka.
1 Toxoplasmosis ee uurka
1.1 Khatarta uurjiifka
1.2 Ka hortagga toxoplasmosis xilliga uurka
Toxoplasmosis ee uurka
Durante uurka Waa lagama maarmaan in la raaco tilmaamaha iyo talooyinka qaarkood ee ku saabsan cuntada iyo caadooyinka kale, maadaama ay jiraan khataro kala duwan oo horumarinta uurjiifka. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah waa toxoplasmosis. cudur dhowr siyaabood oo kala duwan lagu qaadi karo.
Iyadoo loo marayo isticmaalka hilibka wax yar ama si liidata loo kariyey oo ay ku jiraan dulin.
By hadhaagii dulin ee laga yaabo inay joogaan saxarada bisadaha.
Ku faafaya mandheerta oo dhan hooyada ilaa uurjiifka.
Taasi waa, toxoplasmosis ma faafin qof ilaa qof, marka laga reebo xilliga uurka. Iyo dhibaatada dheeraadka ah ee jirta oo aan weli jirin tallaal maanta, waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo faafinta xilliga uurka. Sidan, khatarta muhiimka ah ayaa looga fogaanayaa horumarinta uurjiifka. Gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya ee uurka, halkaasoo khatarta uurjiifku ka sii badan yahay.
Toxoplasmosis waxay noqon kartaa mid ka sii daran ama ka sii daran uurjiifka, gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya ama ilaa saddexda bilood ee saddexaad. Waxaa ka mid ah suurtagalnimada Cawaaqibta ka dhalan karta marka caabuqa la qaadayo toxoplasmosis waa kuwan soo socda.
Miisaan dhalasho oo hooseysa, kaas oo dhinaca caafimaadka loo yaqaano dib u dhac korriin.
Dhibaatooyinka aragga, oo ay ku jiraan indho la'aanta.
khatarta dhicintagaar ahaan saddexda bilood ee ugu horreeya uurka.
Toxoplasmosis sidoo kale way dhici kartaa saameeya horumarka habdhiska dhexe ee neerfayaashamaskaxda, maqalka, beerka, beeryarada, habka lymfatic iyo xataa sambabada.
Calaamaduhu aad bay u kala duwanaan karaan xaalad kasta, waxa si joogto ah u dhaca waa daahitaanka cudurka marka ilmuhu dhasho. Guud ahaan Isha qaawan lagama mahadiyo oo way soo muuqdaan maadaama ay jiraan dib u dhac ama khalkhal ku yimaada koritaanka ilmaha. Habka kaliya ee lagu ogaan karo caabuqa toxoplasmosis xilliga uurka waa amniocentesis, baaritaanka intrauterine kaas oo la sameeyo marka ay jiraan calaamado taas iyo dhibaatooyin kale.
Ka hortagga toxoplasmosis xilliga uurka
Difaaca iyo dareenka toxoplasmosis waxaa lagu ogaan karaa baaritaanada caafimaad ee la sameeyay laga bilaabo bilowga uurka, kuwaas oo kama hortagayso in la qaado inta uurka lagu jiro. Si taas looga fogaado, waa inaad raacdaa talada umulisadaada, taasoo noqon doonta sida soo socota guud ahaan.
Ha cunin hilib aan si fiican loo karin iyo/ama hore u qoto dheeraa.
Ka fogow cuntooyinka cayriin lagu isticmaalo, sida sausages ama carpaccio.
qaado kaliya caanaha iyo waxyaabaha la soo saaray ee la pasteurized. Taas oo macnaheedu yahay inaadan qaadan karin meeris ama alaab ay ku jirto ukun ceeriin ah.
Haddii aad leedahay bisado, kaliya waa inaad iska ilaali saxarada kaas oo ah halka laga helo hadhaagii dulinku haddii ay dhacdo in neefku uu cunay xoolo kale oo ceeriin ah oo uu ku dhaco.
Tani macnaheedu maaha inaad ka fogaato bisadaada, kaliya jooji nadiifinta qashinka bisaddaada oo u oggolow dadka kale inay sameeyaan. Oo haddii aad dibadda wax ka cuni doonto, hubi inaad dooratid alaab si wanaagsan loo kariyey, iska ilaali khudaarta ceeriin Haddii ay dhacdo in aysan aad u nadiif ahayn iyo tan ugu muhiimsan, ku raaxayso uurkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Uurka » Waa maxay toxoplasmosis sideese u saamaysaa uurka?